Ungabamema njani abantu kwiServer yakho yeNgcaciso
Unokuba neseva esekwe kwisiseko esiqinileyo, kodwa izinto zizolile kuba akukho mntu uvulekileyo Ingxabano , okanye naphina kwenye indawo, uyazi ukuba iseva yakho iyaphila. Kulapho uqala khona ukuthumela iimemo kwaye uqale ngokwakha indawo ohlala kuyo kwi-Intanethi.
Nangona kukuhle ukuvula umhlaba wakho kubo bonke abantu, kwaye iindawo ezinkulu zihlala zinika ulonwabo olukhulu kuwe nakwabanye oncokola nabo, ukuvula iserver yakho kuye wonke umntu kwaye nabani na ngamanye amaxesha angatsala troll . Iitrolls ngabo bajoyina iiseva ngenjongo enye yokuba ziijerks. Owu, ngokuqinisekileyo, unabantu abathanda ukufumana iservery kwiseva (kunene, | Uyilo |?), Kodwa ii-troll ngabantu abahamba ngejugular, bahlekise abanye ngolunya, kunye neziteshi zogaxekile ezinekhonkco ezingekho semxholweni, imifanekiso, kunye eendaba. Gcina ukhumbula ukuba uninzi lweendawo obeka kuzo i-URL yeseva yakho, kokukhona maninzi amathuba okutsala uhlobo olungalunganga lwamalungu oluntu.
Ukukhula koluntu lwakho kuqala nge isimemo , isitshixo somzekeliso kubukumkani bakho kwi-Intanethi. Emva kokuba senze isimemo sethu, siya kuya kweyona ndawo intle ukwabelana ngesimemo sakho kwihlabathi.
1. Ngasekhohlo ngasekhohlo kwe-Discord browser yewindows, khangela igama leseva yakho, cofa uvule imenyu ehlayo, kwaye ukhethe u Memela abantu ukhetho.
Khumbula, le yimenyu ehlayo enxulumene nefayile yakho ye- umncedisi . Ukuba ufuna ukulungelelanisa into ethile kwiseva yakho okanye nayiphi na iseva ongowayo, iya kuba lapha.
Kwi Mema abahlobo kwi [Igama Leseva Yakho] iwindow, uya kubona i-URL evelisiweyo emalunga neseva yakho. Ngakwesokudla, uza kubona iqhosha lokukopa.
Ngaphantsi nje kwe-URL evelisiweyo yeserver yakho iya kuba sisikhanyisi Ikhonkco lakho liphela ngosuku olu-1. Ngokuzenzekelayo, naziphi na ii-URLs ezivelisiweyo ngoku zinokuphila iiyure ezingama-24.
2. Kumzobo, kwikona esekunene ngasekunene kwe-Memela izihlobo kwifestile ye- [Igama Leseva Yakho], livili lamagiya. Cofa ivili lokuhambisa ukuze ujonge iServer mema isimemo seKhonkco esikhoyo.
Olu khetho lunika amaxesha okuphelelwa lixesha kunye nokusikelwa umda kubulungu nakweyiphi na isimemo esivelisayo. Oku kuya kuba nolawulo lwendlela entsha yokubona iserver yakho.
Ukwakha indawo ohlala kuyo kwi-Discord, izimemo kufuneka zisasazwe kwi-Intanethi ukuzisa abantu kuwe.
3. Cofa ku-Phelelwa lixesha emva kwemenyu ehlayo, kwaye ukhethe uNokukhetha.
4. Cofa indawo ekuthiwa yiMax Inani lokuSebenzisa, kwaye ukhethe ukhetho olungenamida.
I-URL oyenzayo enika ukufikelela kwiserver yakho ngoku ayinakuphelelwa ngumhla.
iziphumo ebezingalindelekanga zamalictal
Ngokuhlengahlengisa ixesha lokuphelelwa lixesha kunye nenani labasebenzisi, unokwenza ngokulula i-permalink yeserver ye-Discord yakho ukuba uyihambise kwimidiya yoluntu.
5. Cofa uQhosha iqhosha elitsha.
Ngoku une unxibelelwano , i-URL emileyo engenawo umhla wokupheliswa, enika nabani na onokufikelela kwiseva yakho.
6. Cofa iqhosha elithi Khuphela kwaye uqalise ukwabelana ngesimemo seseva yakho.
Kodwa ngoku ujonge kule permalink, kwaye mhlawumbi ingcinga ibaneka kwingqondo yakho: Kulungile, ngoku uza kwenza ntoni? Ewe, oku kulapho ukwakhiwa koluntu lwakho kuqala khona. Kumnandi! Ngequbuliso i-Intanethi iziva ikhudlwana. Kuya kufuneka wazise abantu ukuba iphi iseva yakho, kodwa baphi abaphulaphuli bakho? Bahluke ngantoni abaphulaphuli kwiqonga leendaba zentlalo ukuya kwiqonga leendaba zosasazo? Yeyiphi indawo ebalaseleyo yokubonisa isimemo sakho kwiqonga lokukhetha?
Ukudibanisa kulapho ndaqala khona ukuva ngeDiscord. Ukuba awuqhelanga neTwitch, eli liqonga elinikezela ukusasaza njengendlela yokudibanisa nehlabathi. Ukusasaza kwabelana ngesiqulatho sexesha lokwenyani esidalwa ngumsingathi okanye iqela lemikhosi, amaxesha amaninzi kubhabho kwaye kude ngokupheleleyo kwintloko yabo. Ekuqaleni, iTwitch-eyokuqala yeqonga lokusasaza- yayiyindlela yokubamba amajelo ekwabelaneni ngamava abo emidlalo nababukeli. Ukusuka ekuqaleni kwayo okuthobekileyo, ukusasaza ngoku kugubungela izihloko ezahlukeneyo. Zininzi amaqonga amatsha anikezela ukusasazwa kweaudiyo nevidiyo, kodwa ezine zihlala zithandwa, zibonelela ngomboneleli:
Ingxabano kulapho uqhubeka khona nokusasaza emva kokuba umsinga ugqithile kwaye ugqityiwe. Abaphulaphuli bakho banokujikajika, bacebise umdlalo omtsha, okanye baxhomeke nje ukuze bazi emva komdlalo kunye naphakathi kwemilambo.
Ke ukusasaza kunceda njani ekufumaneni igama kwiNgxabano yakho?
Abaqulunqi bomxholo banabancedisi abaninzi ukuze babafumane kumsinga. Omnye wabancedisi ngu Ebusuku , umncedisi obonakalayo onceda umsinga wakho ukuba usebenze kakuhle nangokufanelekileyo. I-Nightbot inceda ukubonisa iinginginya zenze ezizodwa imiyalelo okanye imiyalezo oya kufuna ukuyithumela kaninzi.
1. Yiya ku Ebusuku , kunye nokuqinisekisa iakhawunti yakho yokusasaza ngeNightbot.
2. Nje ukuba uyiqinisekisile i-Nightbot, yiya kwimenyu kwicala lasekhohlo lewindows, kwaye ucofe ukhetho lweMiyalelo emva koko ukhethe ngokwezifiso.
Ngexesha lokubhalwa, i-Nightbot ayixhasi i-Facebook. I-YouTube iyaxhaswa, kodwa i-Nightbot isebenza kuphela xa umlambo uphila.
Cofa iqhosha eliluhlaza okongeza uLawulo ukwenza umyalelo wakho wokuqala kumjelo wakho.
Ngomyalelo wakho wokuqala, siya kwenza isimemo sokumenywa kwetyala. Kulapho uya kuthi uncamathisele i-permalink yeseva yakho kwaye yenze kube lula kuwe ukwazisa abantu ukuba unayo i-hangout yedijithali yomjelo wakho.
4. Kwi-Window Yongeza uMyalelo, ukuqala ngokhetho loMyalelo, chwetheza ! ukungavisisani endle.
benadryl idosi yokunceda ukulala
Imiyalelo emininzi kwiTwitch iqala ngesikhuzo kwangoko kulandelwa ligama eliphambili. Akukho zithuba. Akukho manani. Gcina amagama aphambili kwimiyalelo elula.
5. Kwifestile yomyalezo, bhala oku kulandelayo:
Zive ukhululekile ukuba uze kuzonwabisa - [uncamathisela i-permalink yakho apha]
Isici soMyalelo oMiselweyo we-Nightbot senza imiyalezo rhoqo kwiNgxoxo yakho ngegama eliyintloko elikhumbulekayo.
6. Khetha wonke umyalezo osandula ukuwenza, uze ukope (Khuphela + C yeWindows, Command
7. Kwimenyu yokuSebenzisa yeLevellevel, qiniseka ukuba Wonke umntu ukhethiwe.
Ukuba ufuna ukwenza imiyalelo efumanekayo kuye wonke umntu oku-Chat, efumaneka kwabaBhalisi kuphela, okanye efumaneka kuwe kuphela, setha iimvume apha zemiyalelo.
8. Cwangcisa i-Cooldown kwimizuzwana emi-5 ngokuhambisa isilayida usiya ngasekhohlo.
Ukupholisa kulapho useta khona iwotshi xa umyalelo ungaphinda usetyenziswe kwakhona.
9. Yenza i-Alias ​​yakho ibe ligama elifanayo njengomyalelo, okanye ushiye oku kungenanto.
I-alias isetyenziselwa ukufaka lo myalelo komnye umyalelo.
10. Cofa iqhosha lokuThumela oluhlaza okwesibhakabhaka ukongeza lo myalelo kuluhlu lwakho lwemiyalelo yesiko.
11. Buyela kwimenyu yasekhohlo yeNightbot kwaye ukhethe ixesha lesikhethwa kukhetho oludwelisiweyo.
12. Kwi-Add Command window, ukuqala ngokhetho lwe-Command, chwetheza ! ukungavisisani endle.
Kulungile kuwe ukuba usebenzise igama elifanayo elingumyalelo kwigama elifanelekileyo kunye nakwimiyalelo ebhaliweyo.
13. Kwifestile yomyalezo, uncamathisela umyalezo owubhalele i! ukungavisisaniukuyalela okanye ngokulula ukwakha umyalezo osuka kwiNqanaba 5.
Cwangcisa isilayida seTimer ukuya kwimizuzu engama-20.
I-hematoma lump ayizukuhamba
15. Cofa iqhosha lokuThumela oluhlaza okwesibhakabhaka ukongeza lo myalelo kuluhlu lwakho lwemiyalelo yesiko.
Ngalo myalelo wesiko, ngoku ungachwetheza _ _ + _ | kwiwindows yakho yengxoxo kwaye ulahle i-permalink kwiseva yakho kuye wonke umntu obukeleyo. Njengoko umyalelo uvulelekile ukuba nabani na awusebenzise, ​​ungatsho kwiNgxoxo yakho !discord ukukhangela abo babukeleyo beyeke umyalelo wakho kwiNgxoxo.
Usete i umyalelo ophelelwe lixesha apho yonke imizuzu engama-20, ikhonkco le-Discord liya kuvela kwiNgxoxo. Le yindlela efanelekileyo yokwazisa ethatha uxinzelelo kuwe ukuba ukhumbule ukuphosa loo myalelo kwiNgxoxo okanye ubuze iimods zakho ukuba zenze njalo. Ngaphambi kokwenza nayiphi na imiyalelo ukuba iphile, nokuba yimiyalelo okanye ixesha, jonga i-permalink kabini ukuqinisekisa ukuba iyasebenza kwaye ikusa kwiserver yakho. Ungaze wenzakalise ukuqinisekisa ukuba i-URL yakho isebenza ngokufanelekileyo.
Xa useta ixesha kwisikhokelo esizenzekelayo, qiniseka ukuba unexesha phakathi kokuposa ngakunye. Ngemiyalezo emininzi ebekelwe ixesha ecwangcisiweyo kufutshane nenye, ubeka umngcipheko wokugaxela ijelo lakho. Hlala uyazi into oyithethayo nokuba uyithetha nini. Thatha ithuba lokunika amandla kunye nokukhubaza ixesha.
Nge-Nightbot, ukumema abantu kwiseva yakho ye-Discord kuba lula ngokulula. Kulula kakhulu, enyanisweni, yinto ekufuneka ungazikhathazi ngayo. Eyakho iimodareyitha (abo bantu bajonge iNgxoxo yakho ngelixa ujolise ekwenzeni umxholo) kwaye esiqhelo kumjelo wakho baya kulahla incwadi yesandla yesimemo esivulekileyo ngelixa i-Nightbot iya kuthi, ngokusekwe kwiiparameter zakho ezisetwe, ikhumbuze abo babukele uneNgxabano.
Ngakumbi kusasazo, ngokuthe ngqo kwiTwitch, zive ukhululekile ukujonga Ukudibanisa iiDummies .
ibuprofen efanayo neasprini
05 52 ipilisi emhlophe
uVictoza coupon neinshurensi
Zisetyenziselwa ntoni iXanax
ngubani oza kuqala kwibhola ekhatywayo